सेरोफेरो : निहुँ खोज्ने कोही छ ?
चाहे रुकुम पखलाले गलोस्, चाहे जाँजरकोट हैजाले ढलोस्। चाहे संखुवासभा पहिरामा परोस्। चाहे राजधानीमा गाडीले मान्छे किचेर सोतर पारोस्। सय पचास, मारे मारोस्। न पखला टाल्ने मेरो काम। न हैजा सम्हाल्ने मेरो काम। रातमा न गाडी रोकेर पार्नु जाम। भिर पहिरामा चिप्लनेलाइ भन्न सक्छु, बस् हरे कृष्ण हरे राम। देखाउनका लागि त गैदिन्छु, आँशु चुहाउनेमा सहभागि भैदिन्छु। दुइचार भाषण ठोकौंला, दुइचार लाश बोकौंला, एक दुइ समाचार छर्कौला, दुइचार दिनमा र्फकलौं, के भो र ?
कलेजमा हुन्छु भर्ना, हाजिरमा हुन्छु गएल। रडभाला बोक्छु झोलामा, दिनदिनै हुन्छु घायल। टायर मेरो किताब हो, सलाइको काँटी कलम छ। पाए सम्म सलाइ कोर्ने हो, कलेज पनि फोर्ने हो। सडकमा आएर पाठ घोक्ने, यहाँको यस्तै चलन। अर्को पाटीको दबदबामा हुन्छ मन जलन।
जती धेरै ढुंगा हान्यो, उती धेरै नम्बर आउँछ। दुइचारवटा बस नजलाए, दुइ बर्षै ब्याक लाउँछ। ठोक्न पर्छ ढुंगाले। घोक्न पर्छ बन्दको पाठ। जाँच दिने पाटी कार्यलय बसेर, रिजल्ट सबै फस्ट डिभिजन पास। गज्जब छैन त पढाइ ?
सबै भन्दा पिरो म। नेपालको हुँ हिरो म। अहिलेको महंगी भन्दापनि बढेको छ मेरो भाउ। हरेक दल भन्दैछन्, युवा मेरो पाटीमा आउ। जता गएनी लड्ने हो, राजनीतिको पाठ पढ्ने हो। कस्ले भन्छ सड्ने हो ? यसरी नै अगाडि बढ्ने हो।
कर्ण्ााली भोको भएनी, मेरो त पेट टन्नै छ। मेलम्चीबाटैमा रोकिएनी, मिनरलवाटर पुगेकै छ। काठमाडौंमा फोहोर के थुप्रेया छ र ? जती हामी थुप्रेका छौं। त्यसैले त सानो कुरामा, सडकमा आएर उप|mेका छौं।
यसरी नै हुर्क्या छौं, युवा हामी नेपालयो, आउँदैन बुद्धी फर्केर नझरी टाउकाको कपाल यो। नेताले हामीलाई सिकाका, यसरी नै देश चलाउने। हामीलाई सडकमा उफारी, हरेक सरकारलाइ ढलाउने। गर्नुपर्छ चाकडी, युवा हामी नथाकी, पाइदैन जागिर यो देशमा, नेताका पछि नलागि।
पहिला मज्जाले गोद्ने हो, अनि बाँकी कुरा सोध्ने हो। डर त्रास देखाएर जोखिने हो, दादागिरीको कानुनमा चोखिने हो। यही मेरो कानुन, दुनियाँले जानुन। तैपनि आँखा तर्छन, पत्रकार ठूला कुरा गर्छन, 'बुद्धलाई रगतले छोइच, नेपाली आमा रोइछ'। आफ्नो त घ्याम्पोमा जाँड छ, ठेकिमा मोही छ। दिन्छु अनि ठूला कुरा गर्ने ? ओइ निहुँ खोज्ने कोही छ ?
Chaitanya January 19, 2011 at 3:42 AM
I don't think there is anyone. If you ask is there anyone to be the prime minister, there will be many.
पशुपति शर्माको गीतको चर्चा सडकदेखि संसद भवनसम्म : शर्माले गीत सच्याएर ल्याउलान् कि त्यतिकै?